R/wasaare Cabdi Weli oo xal u raadinaya buuqa ka taagan dekedda Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
R/wasaare Cabdi Weli oo xal u raadinaya buuqa ka taagan dekedda Muqdisho
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo xubno ka tirsan golaha Wasiirrada oo kormeer saacado qaatay ku tegay dekadda magaalada Muqdisho, taas oo baryihii u danbeeyay ay ka jireen cabashooyin ay muujinayeen xoogsatada ka shaqaysa ayaa isku dayaya in xal loo helo cabashada xoogsatada.
Booqashada ra’iisal wasaaraha ayaa la xiriirtay u kuur galidda cabashooyin ka dhan ah shirakadda Al-Bayrak ee laga leeyahay dalka Turkiga oo dhowaan lagu wareejiyey maamulka dekedda oo ka yimid xoogsatada iyo ganacsatada adeegsata dekedda.
R/wasaare Cabdi Weli iyo xubnaha Golaha Wasiirada ee la socday ayaa la kulmay maamulka dekedda iyo mas’uuliyiin ka tirsan madaxda Shirkadda Turkiga ah ee Albayrak.
Kulanka uu Ra’iisul Wasaaruhu la yeeshay maamulka iyo qeybaha ka howlgallada dekadda markii uu soo dhammaaday kaddib, ayaa waxaa Saxaafadda la hadlay Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Xukuumada Federaalka Soomaaliya, Yuusuf Macalin Amiin (Baadiyow) oo sheegay in ujeeddada booqashada Ra’iisul Wasaaraha ay tahay u-kuurgalidda cabashooyinkii baryahaan ka imaanayay shaqaalaha muruq-maalatada Dekadda.
“Booqashada Ra’iisul Wasaaruhu waxay ahayd si loo ogaado hawlaha ka socda Dekadda iyo cabashooyinkii baryahaan ka imaanayay shaqaalaha iyo Muruq-maalka, wuxuuna la kulmay qeybaha kala duwan ee ka howlgala Dekadda, ujeedkuna wuxuu ahaa in xal laga gaaro mad-madowgii baryahan jiray, guddi ayaana loo saaray arrintan kasoo tallo bixiya” ayuu yiri Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda, Yuusuf Macalin Baadiyow oo intaas ku daray kulankii manta in uu guul iyo is-afgarad kusoo dhammaaday.
Ma jiro go’aan rasmi ah oo kazoo baxay dowladda Soomaaliya, kaasoo xal looga gaarayo cabashada sii xoogeysaneysa ee ka imaaneysa qaar ka mid ah xoogsatada oo sheegaya in shaqada laga ceyriyey, booskoodana lagu badelay shaqaale Turki ah.
Sawirro: Bas guri qiimihiisu dhanyahay $2 Milyan dollar